Feo olana ny toerana misy anao Boeing 747 (FSX)
fanontaniana Feo olana ny toerana misy anao Boeing 747 (FSX)
1 taona 7 volana lasa izay #692 by Tillon
Salama ry tary!
Rehefa manidina akory va toerana misy anao fsx Boeing 747 Tsy afaka mahazo feo (fitaovana, fanaraha-maso, ...).
Niezaka raha hamerina ny zava-drehetra, ary nanamboatra FSX miaraka amin'ny CD-ROM, fa tsy misy manampy.
5 volana 1 andro lasa izay #1209 by FlankerAtRicoo
Raha misy fiaramanidina hafa manome feo marina dia manizingizina aho fa ny rakitra feo 747 dia simba na ny sound.cfg dia tsy hita na tsy misy ao amin'ny ordinateranao Sounds an'ny 747.
Jereo koa raha toa ka tsy naharesy lahatra q ianao izay maneso ny feo ao amin'ny FSX.
Azonao atao ny manandrana mandefa fonosana fanatanjahan-tena (misy olona maro maimaim-poana) ary jereo raha tianao izy ireo ...
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Tillon